Category: इतिहास | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
इतिहास – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १७ , २०७८ बुधबार- ०७:३४
इतिहास विगत हो । विगतमा मानिसले गरेका काम, घटेका भटना र सामाजिक जीवनको चित्र हो । बाँच्नका लागि गरिएका सङ्घर्षहरूको त्यस्तो चित्र जुन सधै अपूर्ण हुन्छ । निरन्तर थपिदै जाने रङले जसरी प्रारम्भिक चरणको क्यानभास बदलिँदै जान्छ त्यस्तै हो इतिहास । पुरानो विर्सिदै जानु र नयाँ निर्माण हुनु । सामाजिक	Read more
बाइसी राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १७ , २०७८ बुधबार- ०७:०४
लिच्छवी कालसम्म एकीकृत रहेको नेपाल लिच्छवि सभ्यताको पतनपछि कमजोर र छिन्नभिन्न भयो । लिच्छवि वंशका अन्तिम राजा मानदेव तृतीयको मृत्युपछि खस साम्राज्य नेपालमण्डल र तिरहुत साम्राज्य गरी तीन राज्यहरू अस्तित्वमा आए । यी तीन साम्राज्यहरूमा खस साम्राज्य विशाल र शक्तिशाली साम्राज्य थियो । खस राजाहरू सिञ्जा उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर शासन	Read more
चौबिसी राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:४९
लिच्छवी कालसम्म एकीकृत रहेको नेपाल लिच्छवि सभ्यताको पतनपछि कमजोर र छिन्नभिन्न भयो । लिच्छवि वंशका अन्तिम राजा मानदेव तृतीयको मृत्युपछि खस साम्राज्य नेपालमण्डल र तिरहुत साम्राज्य अस्तित्वमा आए । यी तीन साम्राज्यहरूमा नेपालमण्डल एउटा पुरानो र सम्पन्न साम्राज्य थियो । नेपालमण्डलका राजाहरू लिच्छवि सभ्यतामा विकसित भएको काठमाडौं उपत्यकालाई नै केन्द्र	Read more
पूर्वका राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:४५
(१) मकवानपुर सेन वंशावली अनुसार मुसलमानको आक्रमणपछि चितौरका राजवंशी सेनहरू वि.सं. ११९९ मा नेपाल पसेका थिए । यसरी नेपाल छिरेका सेनहरू मकवानपुर आसपास बसेको पाइन्छ । त्यहाँबाट पाल्पातिर सर्दै गएका सेनहरूले स्वतन्त्र पाल्पा राज्यको स्थापना गरेको थिए । यसरी पाल्पा राज्य स्थापना गर्नेमा रत्नसेनका एघारौँ पुस्ताका राजा रुद्रसेन थिए	Read more
काठमाडौंका राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:३९
काठमाडौंका राज्य (१) कान्तिपुर राज्य एकीकृत र केन्द्रीकृत नेपालमण्डल अन्तर्गतका अन्तिम राजा यक्ष मल्लको मृत्युपछि नेपाल मण्डल विभिन्न ससाना राज्यमा विभक्त भयो । कतिपयले यक्ष मल्ल स्वयम्ले आफ्ना तीनभाइ छोराहरूलाई काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन भाग लगाइ अलगअलग शासन गर्न दिएका थिए पनि भन्छन् । तर यसको प्रमाण कतै भेटिदैन	Read more
खस साम्राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:२३
समयक्रममा पूर्वमध्यकालीन समयको नेपाल एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपमा एउटै राज्यको रूपमा रहन सकेन । केन्द्रीय प्रशासन कमजोर भएको मौका छोपी पश्चिम कर्णालीमा छुट्टै राज्यको रूपमा खस राज्य अस्तित्वमा आयो । पहिल्यैदेखि पश्चिम एशियाबाट ककेशिया मानसरोवर हुँदै खसआर्य नेपालको पश्चिम भागमा आएर बसोबास गरेका थिए । यो जाति आर्य भए पनि	Read more
तिरहुत साम्राज्य – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:१६
मगघ सम्राट अजातशत्रु (४९३–४६२ इ.पू.)बाट पराजीत भएपछि बज्जि गणराज्य छिन्नभिन्न भयो । बज्जिसंघभित्रका विदेहसहित अन्य राज्यहरूको अस्तित्व पनि सकियो । विशाल वैशाली गणराज्य पनि तहसनहस भयो । वैशालीमा शासन गरिरहेका लिच्छवी र मिथिलाका ब्राह्मणहरूको भागाभाग भयो । उनीहरू भागेर नेपाल पसे । अजातशत्रुको अधिनमा पर्न गएको मिथिला त्यसपछि हर्षवर्धन र	Read more
नेपाल मण्डल – विष्णु भण्डारी
on: कार्तिक १३ , २०७८ शनिबार- ०९:१०
लिच्छवि सभ्यताको पतनपछिको काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो । हुन त लिच्छवि कालको उत्तरार्धदेखि नै यसलाई नेपाल मण्डल भन्न थालिएको थियो । काठमाडौं ज्ञानेश्वरमा मन्दिर अगाडि पाइएको लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको शिलालेखमा नेपालमण्डल लेखिएबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । उक्त शिलालेखमा नेपालमण्डलान्त निवासित लेखेको छ भने बलम्बुमा भेटिएको शिवदेव द्वितीयको	Read more
लिच्छवी सभ्यता – विष्णु भण्डारी
on: श्रावण १५ , २०७८ शुक्रबार- १०:१९
नेपालको प्रचीन सभ्यताको विकासमा लिच्छवीहरूको महङ्खवपूर्ण हात रहेको छ । लिच्छवी उत्तर भारतबाट आएको जाति हो । मगघ सम्राट अजातशत्रु (४९३–४६२ इ.पू.) बाट पराजीत भएपछि वैशाली गणराज्य तहसनहस भयो । वैशालीमा शासन गरिरहेका लिच्छवीहरूको भागाभाग भयो । उनीहरू भागेर नेपाल पसे । अजातशत्रुबाट पराजीत भई नेपाल पस्नेहरूको लर्को नै लागेको	Read more
on: श्रावण ९ , २०७८ शनिबार- ०९:४६
अहिलेको जनकपुर कुनै समय घनाजङ्गलले घेरिएको डरलाग्दो ठाउँ थियो । घना जङ्गल भएपछि जङ्गली जनावरको डर स्वभाविकै हुने भयो । पश्चिमबाट पूर्वतिर उर्वर ठाउँको खोजीमा हिँडेको वैदिक आर्यको एउटा गण त्यही ठाउँमा पुगेर रोकियो । उक्त गणका नायक थिए माधव विदेह । विदेहले जङ्गलमा आगो लगाएर हिंस्रक जनावरबाट गणलाई	Read more